Ezi zezona ntaba zibalulekileyo nemilambo eMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
IMorocco, emantla ntshona Afrika, lisango lokuya kwilizwekazi laseAfrika kubantu abaninzi baseYurophu, ukusukela ubuhle bayo bendalo kunye nokubukeka okumangalisayo kwezinye zezixeko needolophana zayo ziye zaba yindawo ekubhekiswa kuyo kukhenketho lwehlabathi.
Kweli nqaku siza kuthetha ngejografi yaseMorocco, ngakumbi ubume bayo nemilambo kunye neentaba eziphambili ezihlala kulo mmandla umangalisayo wonxweme lwaseAfrika.
Ngokwendalo iMorocco ineentaba ezine:
iGrand Atlas kunye
Intaba yayo ephezulu yiToubkal, engaphezulu kwe-4.000 yeemitha zokuphakama. Phakathi kweRif kunye ne-Middle Atlas yiSebu Valley, enye yezona ntili zichume kakhulu eMorocco kunye nelinye lamaziko emveliso yezolimo kule ngingqi.
Eyona milambo iphambili yile: Sebu, Muluya, Oum Er-Rbia, Tensift, Sus kunye neDraa.
Kancinci kancinci ndizokutyhilela iimfihlelo kunye nemimangaliso yeentaba kunye nemilambo yaseMorocco.
2 I-Atlas ePhakathi
3 Iiatlasi ezinkulu
4 I-Antiatlas okanye iAtlas encinci
5 Umzobo wamanzi waseMorocco
Ngummandla apho iintaba kunye neendawo eziluhlaza zidibeneyo, unxweme lweMeditera. Ngokwesiko ibiyindawo eyodwa kwaye ihlelelekile. Abemi bayo ziiBerbers okanye iiAmaziges, kunye neeArabhu, enyanisweni uninzi lwabantu baseYurophu Xa abantu baseYurophu betyelele iRif, bayothuka yimbonakalo yabemi bayo, kuba uninzi lwabo lunembonakalo yaseYurophu, abantu abanesikhumba esikhanyayo, amehlo aluhlaza, ngwevu okanye luhlaza kwaye blonde okanye bomvu. Kulawulo, inamaphondo amathandathu aseMorocco: Alhuceima, Nador, Uchda, Driouch, Berkane kunye neTaza kunye nesixeko esizimeleyo saseSpain iMelilla.
Olu luhlu lweentaba aluphakame ngokugqithileyo, ukuphakama kwalo kungaphezulu kweemitha ezingama-2.000 XNUMXIngqungquthela yayo ephezulu yiTidirhin, eyi-2.452 yeemitha ukuphakama kwaye ikummandla weRetama.
ngokumangalisayo Iilwandle zonxweme iRif, emazantsi eentaba, zezona zilungileyo eMorocco, nto leyo ebenza babe nomtsalane kubakhenkethi.
Lo mmandla waziwa ngokuba yiSwitzerland yaseMorocco kuba kwiintaba zayo kukho iidolophu ezincinci eziphakathi, ubukhulu becala iBerber ngokubonakala.. I-Middle Atlas yi-18% yommandla weentaba waseMorocco, olulela i-350 km, phakathi kweRif kunye neAtlas ePhakamileyo. Ukongezwa kwayo kuhlala kumaphondo aseKhénifra, e-Ifrane, eBoulmane, eSefrou, e-El Hajeb, nakwinxalenye yamaphondo aseTaza naseBeni Mellal.
Kwi-Middle Atlas ungayifumana iTazekka National Park, enemihombiso yemiqolomba nemiqolomba kunye ne-Ifrane National Park, eyaziwa kakhulu ngamabhabhathane ayo eyahlukileyo, kunye nepaki yaseTazekka.
Iintaba zayo eziphakamileyo yiJebel Bou Naceur kwiimitha ezingama-3.356, emva koko yiJebel Mouâsker kwiimitha ezingama-3.277, kunye neJebel Bou Iblane kwiimitha ezingama-3.192, kufutshane neImmouzer Marmoucha.
Kwiintaba zayo imilambo ephambili yaseMorocco iyazalwa, endiza kuthetha nayo kwicandelo elilandelayo.
IGreat Atlas, okanye iAtlas ePhakamileyo ineyona ndawo iphakamileyo kuwo wonke uMntla Afrika, kunye neyona ndawo iphakamileyo kwiNtaba iToubkal (4.167 yeemitha). Olu luhlu lunomtsalane lwentaba sisithintelo semozulu yaseMorocco, sahlula amanxweme oLwandle lweMeditera kunye noLwandlekazi lweAtlantic ukusuka kwintlango yaseSahara kwaye, ewe, yenye yezinto ezibangela ukoma kwale ntlango, ethi Ukujika kubangela utshintsho olukhulu kububanzi beentaba. Kwiindawo eziphakamileyo zeentaba ikhephu liwa rhoqo, ukuvumela imidlalo yasebusika ukuba iqheliselwe kakuhle entwasahlobo.
I-Antiatlas okanye iAtlas encinci
I-Antiatlas ikwabizwa ngokuba yi-Little Atlas Iyanda eMorocco, ukusuka kuLwandlekazi lweAtlantic kumazantsi mpuma, ukuya emantla mpuma, ekuphakameni kwe-Ouarzazate kunye nokuya empuma kwisixeko saseTafilalt. Emazantsi ifikelela kwimida yeSahara.
Eyona ngqungquthela iphezulu ziimitha ezingama-2.712 ukuphakama yi-Amalou n'Mansour, ebekwe kumazantsi mpuma esixeko i-Iknioun, e-El Jbel Saghro okanye eJebel Saghro massif.
Vula imimoya eshushu neyomileyo yaseSahara, I-Antiatlas isagcina iintlambo kunye neoyase eziyinyani ezinkcenkceshelwayo nezilinywayo, ezinje ngeTafraoute, ezibangela umahluko obalulekileyo kumathafa kunye nomhlaba obharhileyo wezona ndawo zivelileyo.
Umzobo wamanzi waseMorocco
Eyona milambo ibalulekileyo nenamandla eMorocco iqukuqela ingena kwiMeditera kunye nakwithambeka iAtlantic, kwaye zezi:
Umlambo iSebu kumantla eMorocco uqukuqela uye eFez emva koko uye ngasentshona kuLwandlekazi lweAtlantic. Inobude beekhilomitha ezingama-458 yaye amanzi alo atyebisa isitya sokuhlwayela yeminquma, irayisi, ingqolowa, i-beet kunye neidiliya, eyenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zichume kakhulu elizweni. Olona lawulo lubalulekileyo yi-Uarga, Baht kunye ne-Inauen.
Umlambo iMuluya, omnye obalulekileyo, unoyena mmandla mkhulu wehydrographic eMorocco nakwimilambo engeyiyo iSahara eMntla Afrika.. Ithululela kwiMeditera, kufutshane kakhulu neAlgeria. Iziqithi zeChafarinas zijongene nomlomo omile okwe-delta, malunga neekhilomitha ezine ukusuka apho. Indawo yomlomo kunye nolungelelwaniso lwayo lwamanxweme yindawo ebaluleke kakhulu enomdla webhayoloji, ebandakanyiwe kuluhlu lwamazwe omhlaba omanzi lweRamsar.
Igama lomlambo i-Oum Er-Rbia lithetha umama wentwasahlobo, ngumlambo wesibini eMorocco ngobude. Ukuhamba kwayo okuninzi kukhokelele ekwakhiweni kwamadama, ukuya kuthi ga kwisibhozo, nto leyo eyenze yaba lilitye lembombo lombane wombane kunye nonkcenkceshelo lwaseMorocco, nangona ingekonelisi.
Umlambo iTensift uvela kwi-Atlas ePhakamileyo kwaye uthululela kuLwandlekazi lweAtlantic, phakathi kweSafi ne-Essaouira. Nangona ifumana imirhumo emininzi, ukuhamba kwayo akuqhelekanga, iphantse yome ehlotyeni.
IDraa ngowona mlambo mde eMorocco naseAlgeria, omalunga neekhilomitha ezili-1.100. Izalelwe kwiAtlas ePhakamileyo kwaye ithululela kuLwandlekazi lweAtlantic. Ngumlambo oqukuqela ngendlela ekhethekileyo okanye indlela, kuba iimeko zemozulu ezingamawaka eminyaka ziyitshintshile indlela eya kuyo, ukuze okwangoku amanzi ayo ahluzwe kwisanti yentlango edlulileyo iMhamid kwaye iqhubeke ikhosi yayo ngendlela ephantsi komhlaba, ukuya ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-600 ukuya kwiAtlantic. Kuphela kwiminyaka ekhethekileyo yemvula ebuyela ebhedini yayo endala.
Okokugqibela, ndiza kukuxelela malunga noMlambo iSus ohamba ngokudakumba kwingingqi yeSouss-Massa-Draa, ethi yona inike igama layo, kwaye ithululele kuLwandlekazi lweAtlantic. Eyona nto ibaluleke kakhulu ngalo mlambo bubutyebi bendalo bomlomo wawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iintaba kunye nemilambo yaseMorocco
I-Tarragona: imbali kunye nenkcubeko kwiMeditera